Blaogin'i leboda | 2
Mbola ilay resak kolontsaina ihany e!
[ Ankapobeny ] 08 Janoary, 2009 20:00:: Voavaky in- (1079)
Misaotra betsaka an'ireo efa namaly sahady ary izay mbola hitondra ny anjara biriky e!
Marina tokoa fa tena teorika hoy ilay namana izay lay resaka. Ekena tokoa izany.
Tsy ny fivavahana, na ny fanjanahantany tokoa no soketaina fa nanimba antsika fa tanara ireny ary nitondra zavatra samihafa teto.
Haka ohatra iray mba hamapazava ny tiana hambara ary aho.
Malaza ary tena ilofosana ny resaka rano, fidiovana ary fanadiovana amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Dia miasa amin'izany ny toeram-piasako.
Malaza fa tsy manaiky ny fampiasana ny lavapiringa ny aty amin'ny faritra atsimo.
Nanao fanentanana sy dinika mikasika izany tamin'ny Kaominia iray ny namana. Dia nijoro ny lehilahy iray fa fady aty amin'izy ireo ny manao lavaka sy mampiasa ny lavapiringa ary tena mila hanaovana sorona mba handiovana azy raha manao izany izy.
Dia nametraka fanontaniana ilay mpanentana tamin'ny besinimaro nanatrika teo hoe : marina ve izany? Dia namaly ny ankamaroany (indrindra fa ny tanora sy ny mbola tsy nahazo taona) fa marina io. Dia niangavy lay mpanentana raha misy zokiolona eo. Dia nitsangana ny lehilahy iray izay tena efa zokiolona tokoa.
Tsy marina izany hoy izy satria misy fitenenana aty amintsika milaza hoe : "Aza tratra hariva manary maloton-jaza sao voan'ny sovoka". Inona no dikan'izany? Tsy hoe ny sovoka no misy fa ilazana ny halaviran'ny toerana fanariana ny maloto ary efa voatokana izany. Saingy noho ny fiovan'ny toetsaina dia eto an-tanana no anaovan'ny zaza maloto ary na dia ny olon-dehibe aza dia manao tsy lavitra ny tanana amin'izao fotoana izao. Ka tsy gaga isika raha tsy mahomby daholo ny atao rehetra satria efa tena maloto isika ka misintaka lavitra ny fanambinana rehetra.
Dia naverina tamin'ny rehetra ny fanontaniana ka tapakevitra ny rehetra fa averina io fomba amam-panao io.
Dia nitsangana indray ny solontenan'ny kristianina fa tsy manaraka ny fomban-drazana intsony ry zareo ka inona no atao? Vakio ny ao amin'ny Baiboly Deteronomy 23, 13-15 hoy ilay Mpanentana izay efa nivonona tamin'ny Baiboly. Izao no voasoratra ao : Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
"Ary aoka hisy tany voafaritrao any ivelan'ny toby ho fivoahanao;ary mitondrà fantaka miaraka amin'ny fiadianao, ka raha hipetraka eny ivelany ianao, dia mihadia lavaka amin'ny fantaka, ka totofy ny fivalananao.
Fa Jehovah Andriamanitrao mandeha eo afovoan'ny tobinao hamonjy anao sy hanolotra ny fahavalonao eo anoloanao; ka dia ho masina ny tobinao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao."
Mazava ho azy fa tankina ireo kristianina rehetra ary nanapa-kevitra fa hanorina lavapiringa ny fiangonana ary isan-tokantrano dia samy hiezaka.
Ny Fokontany rehetra ao amin'io Kaominina io dia tapa-kevitra fa hamerina ny fomba teo aloha hatokana ho fivoahana ary any no hanorenana lava-piringa.
Inona ary no azo tsoahina amin'izay zava-misy izay?
Voalohany, efa very ny tena fomba amam-panao ka izay metimety amin'ny tsirairay no lazaina fa fomba ama-panao.
Faharoa, heverin'ny kristianina fa rehefa fomba amam-panaon'ny razana dia ratsy sy asan'i Satana avokoa ka aleveno impito mandifotr'olona nefa dia tena mitovy ny voalaza ao anaty Baiboly sy ilay voalazan'ilay zokiolona.
Fahatelo, na dia be fisainana sy fandinihana ireo razan-tsika fahiny dia efa mba nanana izay fandaminana niadiana tamin'ny loto izy ireo.
Fehiny, ilaina ny tena manao dinika miaraka amin'ireo zoky ray aman-dreny isan-tanana ka hahalalana marina ireo fomba fandaminana sy rafitra nisy ka niainana tamin'izany fotoana izany mba iaingana hatao fototra hanorenana na hanamafisana izay fampandrosoana rehetra tiana hapetraka. Maharitra sy hozanahin'ny olona tokoa izany ka haharitra satria mifanaraka amin'ny tena any anatin'ny aty fanahiny.
Ajanoko eto indray aloha fa sao dia lasa teorika indray hoy lay namana iray izay.
Amin'ny manaraka indray e!
(4) Hametraka hevitra (0) Verindrohy (trackback) Rohy maharitra
Raha tsy ivelomana marina ny KOLONTSAINA maha-malagasy dia tsy haharitra ny fampandrosoana
[ Ankapobeny , Kolontsaina ] 08 Janoary, 2009 13:15:: Voavaky in- (1389)
Ankafaliana sy ampanetretena no mba itondrana ny hevitra eto.
Inona tokoa moa ny angovo anaty mampandeha ny olona iray sy ny manodidina azy? Ny kolontsaina no sisa tavela rahefa lasa avokoa ny zava-drehetra hoy ny fitenenana izay.
Io kolontsaina io no hery fanoitra mitondra satria ao daholo ireo Soa toavina nifandovana ka ananana izay fomba fijery sy fisainana miatrika toe-javatra mitranga na atrehina isanandro.
Mbola manana izany kolontsaina izany ary ve isika malagasy? Eny tsy ampisalasalana ny valiny saingy hatraiza no mbola ivelomana azy ankehitriny?
Raha tonga teto antanindrazana ny fivavahana dia nolazaina fa asan'ny demony sy Satana ny fomban-drazana ary nohamafisin'ny fanabeazana sy fisainana tamin'izany fa efa lany andro izany fomba amam-panao izany.
Dia nanao izay ho afany ireo mpanjanaka satria isan'ny tetikady izany tamin'izany fotoana izany ka ny fomba amam-panao frantsay sy tandrefana no filamatra ary nosokajina ho mihemotra sy tsy liam-pandrosoana izay tsy mianatra sy tsy manaraka ny fomba rehetra tamin'izany.
Lasa ny mpanjanaka ary mahaleo tena isika efa 48 taona izay. Inona no zavamisy?
Ny fivavahana tsy naharesy lahatra satria amin'ny andavanandro dia mampiseho fomba sy fiainana sadasada ireo kristianina ka tsy afaka mampiseho ilay fiaraha-monina voalazan'ny Asan'ny Apostoly fahizay.
Etsy andaniny ny fomba frantsay tsy afaka nosalorana ny fombany satria akanjo tsy sahaza antsika.
Inona ary izany no atao? Fa inona no fiantraikan'ireo?
Tsy mety mandroso isika, nefa ny harena ananana misy, ny olona sy ny fahaizana misy be dia be ary isika malagasy no voalohany aty Afrika.
Ny antony tsy misy sahy mamaky bantsilana dia ny fahaverezan'ny kolontsaina na ny marina kokoa dia ny fahasimban'ny rafitra anaty ao amin'ny aty fanahy.
Mitovy amin'ny Solosaina isika raha oharina, ka efa nisy rafitra (systeme) ao voajanahary.
Samy niezaka ny Fivavahana sy ny fanabeazana tandrefana nanova io rafitra anaty (fisainana) io fa tsy nety niorina lay izy fa misy tsy mety mifanaraka (incompatible).
Inona ary no atao? Mbola ao aloha io rafitra anaty io fa mila diovina fa be izay otrikaretina nikiky azy tao izay (virus). Ny fifampidinihana amin'ireo Ray aman-dreny akanga sisa nanamborana sy ireo manam-pahaizana mikirakira izany mba hahafantarana marina ny tena nisy tamin'izany sy ny hevitra tao ambadika rehetra (ity no tena zava-dehibe).
Hivoaka ireo Soa toavina nimatimatesan'ireo razantsika rehetra. Dia halalinina izany ary jerena ny fanasivanana azo atao.
Izany hoe tsy kasihina lay rafitra anaty maha-malagasy fa ireo Soa toavina na hairaha sy haizatra no karohina ny hifanarahany amin'ilay rafitra anaty eo.
Iverenako lay ohatra mikasika ny Solosaina iny hampazava ny tian-kambara : tsy ovana ny rafitra anaty malagasy (systeme) fa lay Soa toavina vaovao na ny hairaha sy ny teknika no tefena mba hifanaraka amin'ilay rafitra ka tsy hanimba azy. Raha adika amin'ilay solosaina teo dia ny fahafahan'ny "Microsoft Office" ampiasaina amin'ny rafitra "Macintosh" sy ny fahafahan'ny rafitra "Windows" mampiasa ny "Adobe Photoshop" ary toy izany koa ny rafitra "Linux". Fanajana ny fisian'ireo rafitra ireo sy ny safidin'ny mpanjifa izany rehetra izany.
Toy izany koa ny tiana resahana eto. Hajaina ary asongadina ny kolontsaina malagasy rehetra. Anjaran'ireo Soa toavina hafa, ireo hairaha hafa, tosakevitra isan-karazany no mampifanaraka amin'ilay rafitra malagasy.
Ajanoko eto aloha fa miandry ny valin-kafatra aho sy ny fanontaniana mba hahafahan-tsika miady hevitra.
LEBODA IHANY E
Tonga soa leboda!
[ Ankapobeny ] 08 Janoary, 2009 09:42:: Voavaky in- (824)